Amazwibela eSabelomali sango-2022/23 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Kunyuke kakhulu eyezenhlakalahle kwiSabelomali salo nyaka
Amazwibela eSabelomali sango-2022/23
ISIYONKE imali yeSabelomali sango-2022/23 iwuR2.16 trillion kanti eminyakeni emithathu ezayo iwuR6.62trn.
Kuloku umNyango wezokuThuthukisa uMphakathi yiwona owabelwe imali enkulu njengoba unikwe uR364.4 billion ngenxa yokululwa kwesikhathi sokukhokhwa kwesibonelelo esiwuR350 osekuzophela ngonyaka ozayo.
Esinye isizathu wukunyuswa kwezinye izibonelelo ngendlela ehambisana namandla emali. Isiyonke imali lo mnyango ozonyuselwa ngayo eminyakeni emithathu ezayo iwuR58.6bn.
“Ngonyaka wezimali wango-2022/23, isibonelelo sempesheni yokuguga, eyabalwela umzabalazo, eyokukhubazeka neyokunakekelwa sizonyuka ngoR90 ngo-Ephreli, sinyuke ngoR10 ngo-Okthoba. Esokunakekela izingane ezingenabazali nesezingane sizonyuka kanye ngoR20 ngo-Ephreli bese siphinde sinyuka ngoR10 ngo-Okthoba.
“KunoR44bn owabelwe ukwelulwa kwesibonelelo esiwuR350 ngezinyanga ezingu-12,” kusho uNgqongqoshe weseziMali uMnu u-Enoch Godongwana.
UmNyango wezeMpilo wabelwe uR259bn kuthi owokuThuthukisa uMnotho wona wabelwa uR227.1bn. EzokuThula nokuPhepha zihlinzekwe ngoR220.7bn kanti ezeMfundo namaSiko zabelwe uR441.5bn.
UGodongwana uthe isikhwama sokuxhasa abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme iNSFAS sizohlinzekwa ngoR32.6bn.
“Somlomo ngesikhathi seCOVID-19 othisha bethu bazidelile ukuqinisekisa ukuthi abantwana bethu bayafunda. Kanjalo nezisebenzi zethu zezempilo bezisekhaleni lokulwa nobhubhane. Kulesi Sabelomali sizokwengeza uR24.6bn emiNyangweni yezeMfundo ezifundazweni ukuze izokwazi ukugcwalisa lapho kushoda khona emiholweni yothisha. Kukhona noR15.6bn owabelwe imiNyango yezeMpilo ezifundazweni ukweseka abakwenzayo ukulwa neCOVID-19 nokugcwalisa lapho kushoda khona ekuthengeni impahla.”
UNgqongqoshe uthe kunoR3.3bn wokuqasha odokotela abangamathwasa nama-community service doctor.
Amaphoyisa engezelwe uR8.7bn, uR1bn wokwengeza isibalo sezisebenzi.
“Siqinisa nezinsizakusebenza zobulungisa nezinkantolo. ISabelomali somNyango wezobuLungisa nokuThuthukisa uMthethosisekelo sizonyuswa ngoR1.1bn kanti iHhovisi leNhloko yamaJaji lizokwengezelwa uR39.9 million.”
Uphiko olunakekela imigwaqo iSANRAL luzohlinzekwa ngoR9.9bn ukunakekela imigwaqo engenawo ama-toll gate.
UGodongwana umemezele nezinhlelo ezihlukene zokuthuthukisa ingqalasizinda. – NguSlindile Khanyile
Ubeke phansi ushoki negeja, waqala ibhizinisi lendawo yokuvakasha nokungcebeleka. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UGodongwana nemizamo yokulekelela izakhamuzi ukuthi zingaklinywa yizindleko zempilo. USLINDILE KHANYILE uyabika